Ma waxaad tahay qof ka daaleen sawirada weli ama qaar ka mid ah GIFs kartoon ah oo ku saabsan internetka ama blog? Ma rabtaa in aad muujiyaan geedka canabka ah video internetka ama blog? Markaas qodobkan noqon doonaa xal kaamil ah. Saxafiyiinta ka soo video lix labaad geedka canabka ah in website ama blog aad u horumarin karaan fiirin iyo dareenka ah website ama blog. In this article, waxaan ku tilmaami doonaa talaabo nidaamka tallaabo ku saabsan sida loo Cudarada lix labaad video geedka canabka ah in website ama blog.
Fadlan la soco in tallaabo walba oo qoraalkan lagu qeexi doono waxaa laga yaabaa in wax yar ka duwan yihiin waxay ku xiran tahay madal aad telefoonka ee, aad madal desktop iyo web browser. Laakiin fikradda waa isku mid oo waxaa loo donealmost karaa isku tallaabooyin.
Waxaad Cudarada kartaa video ah geedka canabka ah oo isticmaalaya soo socda laba methods.Here oo labadoodaba waxaa ka waxaan kaala hadli doonaa.
Habka 1: Isticmaalka website-ka rasmiga ee canabka - vine.co
Habka 2: Isticmaalka nooca ugu dambeeya ee app mobile canabka
Tallaabada 1 Login canabka
Booqo website-ka rasmiga ah geedka canabka ah - https://www.vine.co oo guji badhanka login ee dhinaca sare-midig ee shaashada.
Waxaad kala saxiixday karaa adiga oo isticmaaleya isticmaale jira xisaabta Twitter ama adigoo isticmaalaya cinwaanka Email ansax ah.
Tallaabada 2 Tag oo gurigaaga feed
Ka dib markii ay si guul leh boonooyinka geedka canabka ah, guji Feed Home icon ee geeska kore ee bidix ee boga.
Halkan waxaad ka heli kartaa lix labaad video ah geedka canabka ah ee idinkaa iska leh in aad abuuray iyo posted isticmaalaya app canabka ah.
Tallaabada 3 Hel code
Saar aad curser mouse ee saddexda dhibcood taagan oo ku yaalla canabkiinna video ka badan.
Door Cudarada ka mid ah liiska. Bog cusub ayaa doonaa sida hoos ku qoran
Laga soo bilaabo dhanka bidix ee bogga waxaad bedeli kartaa saldhig oo aad gundhig video canabka ah. Waxaad dooran kartaa laba stylesSimple kala duwan ama kaadh. Waxa kale oo aad ka bedeli kartaa aragti aad video oo dhigay Autoplay ikhtiyaarka audio in On ama Off. Hadda, nuqul xeerka iyo paste website ama blog.
Habkani waa mid la tijaabiyey ee Samsung Galaxy Neo si aad tixraac.
Tallaabada 1 Cayrin ilaa app canabka ah
Fur app ah geedka canabka ah ee telefoonka gacanta iyo abuuro video ah geedka canabka ah.
Tallaabada 2 Sharing video ah
Riix badhanka Share ka.
La wadaag video ah on Facebook ama Twitter. Wixii Maqaalkan waxa aan ka fiirsan doonaa Facebook.
Tallaabada 3 gasho Facebook
Hadda, furo Facebook oo taga si aad Timeline. Waxaad ka heli doontaa video ah geedka canabka ah oo aad la wadaago tallaabo 2 waxaa. Hadda riix video ama sharaxaad ka mid ah video si ay u arkaan. Waxaa laga yaabaa inaad aragto wax la mid ah ee hoos ku
Tallaabada 4 Hel code
Saar aad curser mouse ku badhanka share (saddex dhibcood) iyo la socosho la xusho sida hoos. Waxaad sidoo kale u samayn karaa adigoo riixaya icon Embed ee dhinaca bidix ee boga.
Bog cusub furi doonaa oo dhinaca bidix ee boga in aad bedeli kartaa saldhig oo aad gundhig video canabka ah. Waxaad dooran kartaa laba qaabab kala duwan Simple ama kaadh. Waxa kale oo aad ka bedeli kartaa aragti aad video oo dhigay Autoplay ikhtiyaarka audio in On ama Off. Hadda, nuqul xeerka iyo paste website ama blog.
Maqaalkan waxa aan ka wada hadalnay sidii ay u Cudarada lix labaad video ah geedka canabka ah in website ama blog. Waxaad ka heli kartaa in ay tahay mid aad u fudud oo fudud si Cudarada video ah geedka canabka ah in website ama blog.
> Resource > Video > Sidee Waxaad ahanaya, Vine Videos in Your Website